सरकार पनि 'लक-डाउन' मा त छैन ? | Kendrabindu Nepal Online News
6267408 373961 3045906 2847541
सरकार पनि ‘लक-डाउन’ मा त छैन ?
१८ चैत्र २०७६, मंगलवार २०:२२
आज नेपालसहित सिङ्गो पृथ्वी कोरोना भाइरस (कोभिड १९ )को महामारीबाट गुज्रिरहेको छ । स्मरणीय कुरा के हो भने यसका संक्रमित बिरामी एकलाख पुग्न करिब तीन महिना लागेको थियो । त्यसबाट बढेर दुईलाख पुग्न ११ दिनमात्र लाग्यो । तर कुल संक्रमित संख्या तीन लाख पुग्न त चार दिनमात्र लाग्यो ।
यो आलेख तयार पार्दासम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ८ लाख तीन हजार नाघेको छ भने यसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३९ हजार नाघेको छ । नेपालमा पनि ५ जनामा यसको पुष्टि भइसकेको छ जसमध्ये एक जना निको भएका छन् ।
मलाई सरकारसँग पनि कुनै गुनासो छैन । प्रधानमन्त्री आँफै बिरामी हुनुहुन्छ । भर्खरै मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेर आएका प्रधानमन्त्रीले अहिले घरबाटै सरकार सञ्चालन गरिरहेको सन्देश दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई पनि घरमै बस्न आग्रह गरेका छन् । किनकी सरकारले दशेभर लकडाउन घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले घरबाटै सरकार “सञ्चालन” गरिरहेको छु भनिरहँदा देशमा फैलँदै गरेको महामारी कोरोनाको उपचार गर्ने डाक्टरले ‘पीपिई सम्म पाएका छैनन् । मेरा एकजना डाक्टर साथी छन् जो टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा काम गर्छन् । उनको पीडा र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आकाश पाताल फरक छ । आज जनता देशको नागरिक हैन ‘अरु’ को दर्जामा वाँच्न बाध्य छन् । नेतृत्व भनिरहेको छ– ‘घरमै बसेर सरकार “सञ्चालन” गरिरहेको छु ।
कोरोनाको उपचारमा संलग्न चिकित्सक टोलीसँग एकथान सुरक्षित एप्रोनसम्म छैन भने त्यो देशको सरकारको अरु व्यवस्था कस्तो होला ? आज आइसोलेसनमा भएको मान्छे अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेछ । अरुबेला सरकारी अस्पतालबाट बिरामी ओसार्ने निजी अस्पतालहरू यतिबेला सरकारी अस्पतालमा बिरामी रिफर गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्रीको त के कुरा गर्नु । आफ्नो ज्यान धरापमा राखेर काम गरिरहेका चिकित्सकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उल्टै मनोवल गिर्नेगरी अभिव्यक्ति नै दिइरहेका छन् । उनको अभिव्यक्ति सुनेर उपचारमा खटिएका चिकित्सक टोलीको मनस्थिति कस्तो होला ? विरामीको अवस्था कस्तो होला ? त्यो एकछिन सोच्दै गर्नुहोस् ।
मेरो मनमा एउटै कुरा खेलिरहन्छन् । के साच्चिकै देशमा सरकार “सञ्चालन”मा त छ ? आफ्नै जीवनलाई कालको मुखमा राखेर अरुको जीवन रक्षा गर्न पछि नहट्ने ती डाक्टरलाई मनमनै स्यालुट गरेँ, आँखा मिचेँ । प्रधानमन्त्रीले सरकार “सञ्चालन” गरिरहेको त्यही सन्देशको पछिपछि महावीर पुनले कोरोना उपचारमा संलग्न डाक्टरहरुलाई सुरक्षित एप्रोन दिने समाचार पनि मेरा आँखाले पढेँ– धन्य भने । आँखा ओभाए । तर सरकार “सञ्चालन” भएको भए महावीरले एप्रोन दिनु पर्ने थियो ? आफैंलाई प्रश्न गरेँ ।
प्रश्नले अर्र्काे प्रश्न जन्मायो– को हो सरकार ? बुद्धि–विस्खलनको रोगले ग्रसित देशका विरामी भलाद्मीहरुको थुप्रोलाई म सरकार मानौं कि म्याग्दीको एउटा नागरिक महावीर पुनलाई ?
प्रश्नले नै प्रश्न जन्माउँछन तर प्रश्न कसलाई गरुँ । प्रश्नको उत्तर चुहिने विवेकको भाँडोमा अविवेकवाहेक अरु केही भएको भए धेरै प्रश्नले उत्तर पाउँथे । प्रश्न अनुत्तरित रहने थिएनन्।
फेरि आफैंलाई प्रश्न गरेँ– प्रधानमन्त्रीले ‘तपाइँ पनि घरमै बस्नुहोस’ भन्नु भयो । यो महामारीबाट बच्न घरमा बस्नुको विकल्प छैन । प्रधानमन्त्रीको कुरा एकदम सही हो ।
तर घर नहुने मान्छे कहाँ बस्ने ? कसले “सञ्चालन” गरेको कुन सरकारले ती बेघरलाई कुन घरमा बस्नु भनेको हो ? अलमलमा परेँ । बस्नका लागि घर नै चाहिँदैन, झुपडीमात्र भए पनि हुन्छ । तर त्यो झुपडीमा बस्नका लागि बाँच्नु पर्छ । बाँच्नका लागि खानु पर्छ । झुपडी एउटा सानो अँध्यारो कोठा हो । त्यो कोठा सधैं खाली हुन्छ । त्यो अँध्यारो खाली कोठामा के खाएर बस्नु ? के खाएर बाँच्नु ?
बिहान कमाएर बेलुकी खाने बाबु–आमा त भोकै सुत्लान् । लालाबालाको भोकको आगो केले निभाउनु ?
झुपडीमा मानिसभन्दा बढी भोक बसेको हुन्छ । अभाव बसेको हुन्छ । त्यो झुपडीमा बस्नका लागि त्यो भोक र अभावलाई भगाउनु पर्छ । कसरी भगाउनु ? केले भगाउनु ? प्रहरीको डण्डाले सडकबाट मानिस भगाउँछ तर झुपडीबाट भोक भगाउँदैन । भोकको आगोले देशका झुपडीहरु जलिरहेका छन् । तिनै झुपडीहरुले बनाएको देशको महलमा बस्ने प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन ‘म घरमै बसेर सरकार “सञ्चालन” गरिरहेको छु । तपाईँहरु पनि घरमै बस्नुहोस’सबैप्रकारले सधैं आहत झुपडीका ती जनतालाई खै अलिकति राहत ? घरमै बसेर “सञ्चालन” गरिएको सरकालाई के थाहा, भोकको बास झुपडीमा हुन्छ भनेर । महल पनि भोको छ तर महल र झुपडीको भोक फरक छ– महललाई सुख, सुविधा र सत्ताको भोकमात्र थाहा छ । सरकार त्यही महलबाट “सञ्चालन” भइरहेको हुन्छ ।
मेरो दोलखा जिल्ला मेलुङ गाउपालिकाका एकजना दाइसँग कुरा भयो । उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, “हामीलाई रुघा–खोकीमात्र लाग्यो भने पनि उपचार गर्ने कोही छैन । हामी त उपचारबिनै मर्ने भयौं ।” गाउँका चिकित्साकर्मीहरु विरामी देखेर भाग्छन् । ती स्वयं असुरक्षित छन्, नभागुन् पनि किन ? कोरोनाको त्रासले सबै डराएका छन् । केही भइहाल्यो भने काठामाण्डौंको टेकु जानु भन्छन् । कसरी जानु काठमाडौँको टेकु ? न आफूसँग साधन छ, न कसैले लान्छन् । यो निराशामा अरु कोही छैन– एक ईश्वर मात्रै हाम्रा आशा ।
मैले डोल्पा, हुम्ला, जुम्लाका नेपाली सम्झिएँ । कठैबरा तिनलाई केही भयो भने कुन सरकारले काठमाण्डौ पु¥याउला र उपचार गर्ला ? त्यसैले त हरेक सानातिना रोगव्याधीमा ती सधैं तिनै ईश्वर र देवीदेउता पुकार्छन् । तिनलाई के थाहा, सरकार कस्तो हुन्छ ? सरकार कहाँ छ ? सरकारले के गर्छ ? सरकार कसकालागि हो ?
दुःखमा दैव पुकार्नुलाई हामी अन्धविश्वास भन्छौं, तर्कन्छौं । म उनीहरुको विश्वासलाई अन्धविश्वास भन्दिन । जसले भन्छ उसलाई अन्धस्वार्थी भन्छु र मूर्ख पनि । मानिसप्रति विश्वास जाग्न नसकेर ती मानिसले सदैव दैव पुकारेका हुन । हामीले त्यो विश्वास जगाउन सकेनौ, उनीहरुलाई कहिल्यै विश्वास भएन– मेरा लागि मेरो देशको सरकार छ । अहिले देशमा अलिकति हुनेखानेलाई अर्कै डर छ– भोकै नमरे पनि उपचारबिनै मर्ने डर । केही नहुनेलाई उपचारको चिन्ता छैन, भोकै मर्ने चिन्ताले ऊ मरिरहेको छ ।
देशको नेतृत्वले भनिरहेको छ– म सरकार “सञ्चालन” गरिरहेको छु । फेरि पनि आफैंलाई प्रश्न गर्छु– प्रधानमन्त्रीले अझै सरकार “सञ्चालन” गरिरहनु भएको छ ? छ भने कहाँ छ उहाँको त्यो सरकार ? लक डाउन गरिदियो सक्यो त्यही हो सरकार सञ्चालन भनेको ? कि के हो जनताले बुझ्ने भाषामा भन्नुप¥यो । आफुलाई केही भयो कुदाइहाल्छ एम्बुलेन्सले । जनताको हबिगत यस्तो छ । जुन देशमा निजी क्लिनिक र अस्पताल स्याउँस्याउँती छन् तर कोरोनाको आशङ्का लागेका बिरामी जाँच्न कोही तयार छैनन ।
सरकारको उपस्थिति जनताले देख्नुपर्छ । के जनताले सरकारको उपस्थिति देखेका छन् ? कसलाई विश्वास छ– मेरा लागि मेरो सरकार छ भनेर ? भएको भए कोरोना भाइरसको त्रासले सास फेर्न डराइरहेका जनता भगवानको भरोसामा किन बस्थे ? यस्तै अवस्था नहोस् भनेर डा. गोविन्द केसी सत्रौं पटकसम्म अनशनमा बसेका हुन् ।
एक प्रदेशमा एक सुविधासम्पन्न मेडिकल कलेज सहितको सरकारी अस्पताल खोल्नुपर्ने माग राखे । जनता आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने चाहे । तर एउटा सत्याग्रहीलाई दबाउन सरकारले सधैं बज्रबुद्धि लगायो । दमनको पराकाष्ठा नाघ्न किञ्चित हिच्किचाएन । आज त्यही सरकार “सञ्चालन”मा छ भन्ने पढ्दा मेरा आँखा दुःखी हुन्छन् । दुःखी आँखाले दुःख पोख्छन, आँशु चुहाउँछन ।
डा. केसीले उठाएका माग सम्बोधन गरिएको भए आज यो दुरावस्था आउने थिएन । योभन्दा झन दुरावस्थाका संकेतहरु झन माथि उठ्दैछन् । नेपालीहरु नियतिको हैन, नियतको सिकार हुँदैछन्– । नेतृत्व त्यो डाक्टर हो, जसको हातमा देशको प्राण हुन्छ । जनता देशका प्राण हुन– देश प्राणहिन हुदैछ ।
आज म कसलाई सरकार मानुँ ? डा. गोविन्द केसी, जो जनताका लागि सयौंदिन चिसो भुइँमा भोकै लडे । उनलाई सरकार मानुँ कि सत्तामा बसेर निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजका मालिक बनेका ‘‘धन्धावाला बेपारी’को बगाललाई ? फेरि पनि उही प्रश्नले मलाई अचेट्यो– देशमा कस्तो सरकार कसले “सञ्चालन” गरिरहेको छ ?
कति लेखेँ, कति बोले तर अहिले “सञ्चालन” शब्दको अर्थमा म अड्किए– ‘कन्फ्युज‘ भएँ । अर्थ आफ्नै मातृभाषाको नेपाली बृहत शब्दकोशमा खोजेँ । भेटेँ– ‘कुनै काम वा व्यवस्थालाई सुचारु रुपले चलाउने काम, गतिशील रुपमा निरन्तर चलाइने कुनै काम वा त्यस्तो कामको समुचित प्रवन्ध ।’ तर कहाँ छ त्यो, जुन देशमा त्यो सरकार “सञ्चालन”मा छ ?
सरकारको परिचय खोज्न थालेँ– के हो सरकार ? को हो सरकार ? कसका लागि हो सरकार ? कसलाई मान्ने सरकार ? सरकारको उपस्थिति जनताले देख्नु पर्छ । के जनताले सरकारको उपस्थिति देखेका छन ? कसलाई विश्वास छ– मेरा लागि मेरो सरकार छ भनेर ? भएको भए कोरोना भाइरसको त्रासले सास फेर्न डराइरहेका जनता भगवानको भरोसामा किन बस्थे ?
आज जनतालाई सरकारप्रति न अलिकति आशा छ, न विश्वास छ । छ भने निराशा मात्र छ । त्यो निराशाको आशा सरकार हैन, ईश्वर भएको छ ।
आधुनिक नेपालको प्रधानमन्त्री–मन्त्रीका वाणीहरू कुनै पौरणिक कथामा पढेका ‘फाल्तु लाईन’जस्ता लाग्छन् । निराशाका कर्कश ध्वनीले हाँसो खोसेपछि रुन मन लाग्दो रहेछ । कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरो देखिन्छ भन्थे । देशको आकाशमाथि मडारिएको कालो वादल झन कालो हुँदैछ तर चाँदीको पातलो घेरो कहिल्यै देखेनन्, जनताले । सरकार “सञ्चालन” भइरहेको छ । वादल झन कालो झन बाक्लो हुँदैछ ।
Prevचीनको उहानमा मानिसको हिँडडुल शुरु, बजार पसल खुल्यो
भाइरसविरूद्ध लड्ने नाममा प्रजातान्तिक मूल्यमान्यता कुल्चिनु हुँदैन, यूरोपेली आयोगNext
प्रदेश नं २ सरकारद्वारा कोरोना कोषबाट अस्पतालहरुलाई आठ करोड रकम प्रदान
थप ५ जनामा कोरोना पुष्टि, नेपालमा संक्रमितको संख्या १,५७२ पुग्यो